NextMapping | Ọkachamara Development Goals maka Otu
NextMapping™ nke Otu
Ebe ọrụ ga-eme n'ọdịnihu chọrọ ndị otu na-agbaso 'usoro idu ndú' nwere njikọ.
NextMapping ™ maka ndị otu na-enyere aka wulite ebumnuche mmepe nke ọkachamara nke nnagide, ike na ọgụgụ isi.
N'ọdịnihu, ihe ịga nke ọma otu ga-abụ ikike ha ijikwa onwe ha. ”
OsoteMapping ™ Otu Ndị Njikere Ọdịnihu - Otu esi emepụta ndị agile, ndị na-agbanwe agbanwe & ndị na-agbanwe agbanwe
Ọdịdị ọdịnihu nke otu a na-eweta nyocha na usoro maka ọdịnihu nke otu na nghọta banyere otu otu esi ewulite mmebi na ntanetị nke ụwa na-agbanwe ngwa ngwa. Nnyocha na-egosi na obere ndị obere nwere nnukwu mkpali na ndị nwere onwe ha na-enwe ike imepụta ngwa ngwa. Mmetụta na azụmaahịa na ndị otu na-arụ ọrụ dị elu bụ echiche ọsọ ọsọ iji zụta ahịa, azịza ndị a na-akọ maka ahụmịhe ndị ahịa na n'ikpeazụ asọmpi uru.
Ọdịnihu dị njikere mmepe mmepe maka otu
Amstù nwere ebumnuche mmepe ọkachamara na ihe ịma aka pụrụ iche ka ha na-arụ ọrụ maka ịmepụta nsonaazụ pụrụ iche maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ ahụ. Ihe ịma aka ndị ahụ gụnyere ime ka ọnọdụ a dị ọsọ ọsọ nke mgbanwe na-aga n'ihu, na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụdị mmadụ dị iche iche, ọgbọ dị iche iche, ndị otu dị anya na echiche dịgasị iche iche. Usoro nkuzi pụrụ iche anyị na-enyere ndị otu aka ịnyagharịa 'ihe na-esote' na-enye atụmatụ mmepe mmepe nke NextMapping ™ maka ndị otu iji duzie mgbanwe ndị achọrọ ịdị njikere ugbu a.
Ọdịnihu nke ọrụ ịntanetị n'ịntanetị
N'ọdịnihu ọrụ ga-abụ onye ọ bụla ga-abụ onye ndu na-arụ ọrụ na usoro idu ndú na-emekọ ihe. Nke a apụtaghị na enwere ọtụtụ mmadụ nwere aha ntuli aka - ọ pụtara na ọdịnala ahụ na-elekwasị anya na onye ọ bụla na-ewere ọrụ zuru oke maka nsonaazụ, na-ewulite ikike 'intraloridaurial' na ịbawanye ikike nke mmadụ imekọ ihe na imepụta ngwa ngwa. Ọdịnyo anyị n'ịntanetị nke ọmụmụ ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ bụ ihe dabere na vidiyo ma enwere ike iwere ya ma ọ bụ na-enweghị nkwado nchịkwa.
Zụlite NextMapping gị™ mee atụmatụ maka otu
Ndi otu nwere ndi mmadu, ndi mmadu puru iche. Ebumnuche mmepe ọkachamara maka ndị otu maka ọrụ n'ọdịniihu gụnyere iwulite ụdị omume 'm ka anyị'. Ezi otu imekọ ihe mejupụtara ya bụ onye ọ bụla na-eme ka ịmata banyere onwe ya, inyocha onwe ya, na nghọta ya. Site na usoro nyocha nke NextMapping we anyị na-enyere iji nyochaa ike nke ndị mmadụ na ndị otu, anyị na-enyocha ike otu dị ka mkpokọta ma anyị na-enye usoro na ụzọ dị iche iche maka otu ga-esi nwee ike ịrụ ọrụ na nnukwu ilekwasị anya, mkpali na mmekọrịta.
Zụlite mmekọrịta otu
Tù na-arụ ọrụ n'ike karịa mgbe ọ bụla, oge a na-egbu oge, ebumnuche buru ibu na nrụgide na-aga n'ihu iji rụọ ọrụ karịa. Otutu, ndi otu n’agbadata ihe aga eme na ihe ekwesiri ime taa ma odighi inwe ohere ilebara anya na imezi ihe na nsogbu. Site na nkuzi nke NextMapping ™ maka ndi otu anyi n’enye anyi ngwa oru na atumatu NextMapping to iji nyere ndi otu aka ichota odinihu, meputa uzo ichota ma wulite otu ndi otu ha ga-esi na-aru oru.
Anyị ekpuchiela gị - chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara otu ị ga - esi wuo ndị otu ga - eme n'ọdịnihu ọrụ ebe ọrụ - rute na anyị ga - achọ ijikọ gị.